Dell EMC World: Usoro 10 na-agbanwe Teknụzụ Ozi | Martech Zone
Chei, kedu izu ole na ole! Ọ bụrụ n’ịchọpụtala na anaghị m edekarị akwụkwọ, ọ bụ maka na m mere njem njem Dell EMC Worldwa ebe mụ na Mark Schaefer nwere nsọpụrụ nke ịgba ndị ndu ajụjụ ọnụ ụlọ ọrụ Dell Technology maka ha Nkọwapụta Podcast. Iji mee ka ogbako a banye n'ọnọdụ, agara m ije 4.8 kilomita ụbọchị mbụ ma mee ka m ruo 3 kilomita ụbọchị ọ bụla mgbe… gachara izu ike na ịchọta akụkụ iji nweta ọrụ ụfọdụ. Enwere m ike ịga ije okpukpu abụọ n'ogologo ahụ ma ka na-atụ uche nnukwu ọdịnaya na ihe ngosi.
Ọ bụ ezie na ogbako ahụ lekwasịrị anya na teknụzụ, ọ dị oke mkpa ka ndị na-ahụ maka nkà na ụzụ na-achọpụta ihe na-abịa na teknụzụ ihe ọmụma. Ndị ụlọ ọrụ na-adabereworị na teknụzụ n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akụkụ ọ bụla nke azụmaahịa ha - ma ọdịnihu na-ewetara ya ikike ịgbanwe akụkụ ọ bụla ọzọ.
Tupu ịlele ụfọdụ nkọwa ndị akọwapụtara, ọ dị mkpa ịghọta ihe A kọwara mgbanwe IT dị ka na otu ụlọ ọrụ nwere ike isi nyochaa nke ha mgbanwe maturity.
Gbanwe IT gị ga-amalite site na ịhazi usoro nzukọ gị maka akụrụngwa. E kwesiri iwere ya dika ihe na-akpali akpali maka iru ebumnuche azụmaahịa, ọ bụghị mmezi na idobe ọkụ. Ezubere ebe data nke oge a maka ị nweta ọsọ ọsọ.
Yabụ, anyị niile na-aghọ technology ụlọ ọrụ. Thoselọ ọrụ ndị ahụ na-emezi usoro ha, na-ewe ndị ọrụ kwesịrị ekwesị, ma na-echekwa nchekwa bụ isi na-achọpụta oke ego na-emepe mmefu ego na-ebupụta ngwaahịa na ọrụ ha. Ndị a bụ ụfọdụ n'ime okwu ị kwesịrị ịmalite ịghọta ma chee maka otu ha ga-esi gbanwee ụlọ ọrụ gị na atụmanya ndị ahịa gị n'ọdịnihu dị nso:
Nbidoghari - akụrụngwa akụrụngwa (CI) na - eweta akụkụ bụ isi nke data data - ịhazi, nchekwa, ịkparịta ụka n',ntanet, na ịba uru. Enweghi nhazi ndi mmadu obula, nani ikpo okwu nke ejiri nlezianya choro ya na ihe ndi oru achoro.
Hyper-mgbanwe - jikọtara akụkụ anọ ahụ nke ọma, na-ebelata mkpa ọ dị maka nka na njikọta ma na-ebelata ohere nke njehie ma ọ bụ nkwụsị.
Nleta - Ọ bụ ezie na usoro eji eme ihe adịla kemgbe afọ iri abụọ, ikike maka ịme ihe gafere usoro dị ebe a. Ulo oru di ugbua na etolite na gburugburu ogbe ma obu ihe omuma a na etinye n'ime mmeputa mgbe odi ha nma. Virtualization sọftụwia ga - achọ nhazi obere ma pere mpe ma nwekwuo ọgụgụ isi ka ọ na - enyocha ma na - emeghachi omume na chọrọ.
Ebe nchekwa na-adịgide adịgide - nghazi nke oge a dabere na nchekwa siri ike yana ebe nchekwa, yana mgbakọ na-ebugharị data na azụ. Ebe nchekwa na-agbanwe agbanwe na-agbanwe kọmputa site na ịchekwa nchekwa na ebe nchekwa ebe enwere ike ịgụta ya. A ga-eme ka sistemụ arụmọrụ dị elu na-achọpụta ugboro abụọ na ọsọ ọsọ ọsọ nke sava ụnyaahụ.
Cloud Computing - Anyị na-elekarị igwe ojii anya dị ka ihe akọwapụtara na ngwanrọ anyị, nchekwa anyị, ma ọ bụ sistemụ nchekwa anyị dị na mpaghara data. Otú ọ dị, ndị igwe-oji nke ọdịnihu nwere ike ịbụ ọgụgụ isi ma jikọta igwe ojii, ma ọ bụ mkpụmkpụ, ma ọ bụ igwe ojii na-emepụta ihe ebe niile.
Amamịghe echiche - mgbe ndị ahịa na-aghọta AI dị ka ikike maka ngwanrọ -eche ma weputa ngwanrọ nke ya. Ọ bụ ezie na nke ahụ na-atụ ụjọ, ọ bụ ihe na-atọ ụtọ. AI ga-enye ohere maka ụlọ ọrụ IT ka ọ dị elu, belata ọnụahịa, ma dozie nsogbu na-enweghị enyemaka.
Usoro nhazi asụsụ - ụlọ ọrụ dịka Amazon, Google, Microsoft, na Siri na-aga n'ihu NLP na ikike maka sistemụ iji meghachi omume ma zaghachi iwu dị mfe. Mana ịga n'ihu, sistemụ ndị a ga-agbanwe ma zaghachi dịka ọgụgụ isi (ma ọ bụ ma eleghị anya ọ ka mma) karịa ụmụ mmadụ.
Ngwa ọrụ bara uru - mgbe ị banyere nbanye, ị gaghị eche maka mkpa, grid, amperage, ma ọ bụ nkwado ndabere dị mkpa iji hụ na ike dị na ngwaọrụ gị. Nke a bụ ntuziaka nke ngwaọrụ mkpanaka anyị, laptọọpụ anyị, yana akụrụngwa sava anyị. N'ọtụtụ ụzọ, anyị nọrịị ebe ahụ mana ọ na-aghọwanye eziokwu.
Ezigbo Ngwakọta - ike ngụkọta oge anyị na-atụle ebe a na-aga n'ihu na-abawanye karịa ihe ọ bụla anyị chere n'echiche, na-enyere anyị aka ịbịaru ụwa na-abawanye na nke anyị. Ọ gaghị adị anya site ugbu a tupu anyị na ụwa anyị akpakọrịta karịa iPhone ma ọ bụ Google Glasses, ma nwee implans implants nke jikọtara ụwa anyị n'ezie na ozi anyị na-agbakọ iji bulie ndụ ọ bụla.
Internet Ihe - na-akwụ ụgwọ na-agbada, ngwaike ngwangwa, ịgbasa bandwidth, na mgbakọ na-abawanye uru, IoT na-etolite mgbe niile. Ka anyị na-agwa ndị ọkachamara na Dell Technologies, anyị mụtara banyere mbọ IoT na ahụike, ọrụ ubi, na akụkụ ọ bụla nke ịdị adị anyị.
Otu ihe atụ a kọwara bụ n'iji IoT na ọrụ ugbo ebe a na-etinye ehi ndị na-emepụta mmiri ara ehi na ngwaọrụ nyochaa nri ha na nri ha iji bulie coagulation dị mkpa maka ịmịpụta cheese. Nke a bụ ọkwa ọhụrụ na arụmọrụ anyị na teknụzụ ndị a na-atụle. Chaị!
Ọ bụghị naanị otu teknụzụ ndị a na-eme ka anyị gaa n'ihu, ọ bụ Nchikota ha nile nke ngwa ngwa ịga ahịa. Anyị na-ahụ osooso na teknụzụ anyị ahụbeghị kemgbe mmalite nke ịntanetị na eCommerce. Na, dị ka mgbanwe ndị ahụ, anyị ga-ekiri ka ọtụtụ ụlọ ọrụ na-ejide òkè ahịa site na nkuchi ebe ọtụtụ ndị ọzọ hapụrụ. Ahịa na-aga ịmụta, imeghari, na-atụ anya na gị na ụlọ ọrụ bụ n'ụzọ zuru ezu nyekwara ke technology aka ha ahụmahụ na gị ika.
Companylọ ọrụ ọ bụla ga-abụ ụlọ ọrụ teknụzụ.
Ngosipụta: Dell kwụrụ m ụgwọ ịga Dell EMC World ma rụọ ọrụ na pọdkastị Luminaries. Agbanyeghị, ha enyereghị aka dee ederede a, yabụ ọ nwere ike ịpụta na nkọwa m dị ntakịrị. Enwere m mmasị na teknụzụ, mana ọ pụtaghị na m ghọtara akụkụ ya niile nke ọma!
Tags: aiAmamịghe echicheakpaakaígwé ojii MgbakọmgbanweDelldell emcdell emc ụwagenomicshyperconvergienceiotdị ka eziokwunhazi asụsụNlpnnọgidesi ikemgbanweịba uruvirtualizationVMware
5 Uru Agile Marketing nwere ihe kariri usoro ahia ahia